Hargab ba’an oo la filayo in uu dad badan soo rito - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hargab ba’an oo la filayo in uu dad badan soo rito Photo: Fredrik Sandberg / TT
Hargab ba’an oo la filayo in uu dad badan soo rito
Publicerat torsdag 6 november 2014 kl 09.43
Sida ay sheegtay haayadda caafimaadka qaabilsani, waxa la filayaa in uu dad badan duray ku dhici doono sannadkan. Sida ay haayaddu caafimaadku sheegtay sannadkan dadka uu duraygu ku dhici doonaa way ka badnaan doonaan tiradii sannadkii hore, waxaanay dadka duraygan u nuguli noqon doonaan dadka waa weyn.
Mia Brytting oo ka mid ah saraakiisha haayadda caafimaadka Sweden oo arrintan ka hadlaysaa waxa ay tidhi;
- Waxa aan u malaynayaa in uu dad badan ku dhici doono duraygani. Dadaal fiican baanu se samayn doonaa. Sannadkii hore waxa uu duraygani faafaa aad u saameeyay dhallinyarada, waxa se la filayaa in uu sannadkan soo ridan doono dad badan oo waaweyn.
Toddobaadyadii u danbeeyay waxa la arkayay tiro kooban oo dad ah oo uu cudurkani soo ridanayay, waxa se la filayaa in uu hargabkani dad badan ku dhici doono intaan la gaadhin ciidda miilaadiga Kiristanka. Åsa Vandegren waa 80 jir, waxaanay deggan tahay magaalada Stockholm, waxaanay sheegtay in ay toddobaadka danbe is tallaali doonto.
- Waa mihiim in lays tallaalo, gaar ahaan dadka waaweyn, maxaa yeelay markasta oo qofku weynaado waxa uu u nugul yahay xanuun kasta.
Dhanka kale Peer Andersson oo 67 jir ah ayaa u arka in aan loo baahnayn in lays tallaalo. Waxaanu yidhi;
- Tallaalku waxa uu noqday wax lagu shaqaysto. Sidaasi daraadeed ma rumaysni in lays mudo, waxaanan aamminsanahay in jidhkaygu iska celin karo xanuun kasta.